Al-Shabaab Oo La Wareegay Degaan Katirsan Gobolka Galgaduud – Great Banaadir
Dagalamayaasha Al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay degaan katirsan Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya, wararka inaga soo gaaray Degaanka Ceeldheere oo 30km u jira Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Al-shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta degaankaasi.
Dagaalka oo xalay saqdii dhexe dhacay ayaa waxaa soo qaaday Al-shabaab, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta degaanka, iyadoo dadka degaanka ay soo sheegayaan khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray labada dhinac ee xalay dagaalamay.
Inta la xaqiijiyay labo askari ayaa ku dhimatay dagaalkaasi, halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen, waxaana dadka degaanku ay sheegayaan in ay macquul tahay in khasaaruhu uu intaa ka badan yahay maaddaama dagaalku uu cuslaa, hubka noocyadisa kala duwanna la isku adeegsaday, balse waxaa adeg in la helo khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac.
Horay Al-shabaab ayaa degaankaan kula wareegay iyagoon wax dagaal ah aan galin, balse markii dambe ayay isaga bexeen, waxaana wixii intaas ka dambeeyay gacanta ku hahay Ciidanka Dowladda.
Al-shabaab ayaa dhawanahaan waxaa dagaallo xooggan ay ka wadaan Gobolada Galgaduud iyo Mudug, waxaana xusid mudan in degaaanno katirsan Gobolka Mudug ay Al-shabaab kula dagaalamaeen dadka deegaanka, waxaana sidoo kale ay dagaallo dhowr jiho ah ay ka wadaan Gobolka Galgaduud. – Hiiraan Weyn News